जापानमा ग्रीष्मकालीन पोशाक! तपाईंले के लगाउनु पर्छ? - Best of Japan
जापानी ग्रीष्मकालको मजा कसरी लिने! चाडपर्व, आतिशबाजी, समुद्र तट, होक्काइडो आदि। >
जापानमा ग्रीष्मकालीन पोशाक! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
यदि तपाई ग्रीष्म Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने कस्तो किसिमको कपडा लगाउनु पर्छ? जापानको ग्रीष्म trतु क्षेत्रहरु जस्तै चर्को छ। आर्द्रता पनि उच्च छ। तसर्थ गर्मी को लागी तपाइँ चिसो छोटो बाहुला कपडा तयार गर्न सक्नुहुन्छ जुन गर्मीबाट बच्न सजिलो छ। यद्यपि वातानुकूलन भवनमा प्रभावकारी छ, त्यसैले कृपया कार्डिगन जस्ता पातलो कोटलाई नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म जापानी ग्रीष्म photos तका तस्विरहरूलाई पनि सन्दर्भ गर्नेछु र तपाईलाई कस्तो किसिमको कपडा तयार गर्नुपर्नेछ भनेर परिचय गराउनेछु।
फोटोहरू: जापानी किमोनोको आनन्द लिनुहोस्!
हालसालै क्योटो र टोकियोमा पर्यटकहरूलाई किमोनो भाडामा दिइने सेवाहरू बृद्धि भइरहेका छन्। जापानी किमोनोसँग मौसम अनुसार विभिन्न र colors र कपडाहरू छन्। गर्मी किमोनो (युकाटा) तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ, त्यसैले धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई खरीद गर्छन्। तपाई कुन किमोनो लगाउन चाहानुहुन्छ? जापानी किमोनो जापानी महिलाले किमोनो लगाएको फोटोहरू ...
गर्मीमा म टोपी वा प्यारासोल ल्याउने सल्लाह दिन्छु
गर्मीमा लगाउने लुगाका उदाहरणहरू
के तपाई युकाटा लगाउन चाहानुहुन्छ?
जापानको ग्रीष्म reallyतु होक्काइडो र होन्शुमा उच्च पहाडहरू बाहेक वास्तवमै तातो र आर्द्र छ।
कहिलेकाँही जुन जुन चिसो हुन्छ तपाईंलाई पातलो ज्याकेट चाहिएको छ। यद्यपि जुलाई र अगस्टमा यो सामान्यतया तातो हुन्छ र दिनको तापक्रम प्राय: 35 XNUMX डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। तपाईंले उष्ण प्रदेशीय राज्यहरू जस्तै शान्त लुगाहरू तयार गर्नुपर्दछ।
तपाई ब्यापार जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने पनि, जुलाई वा अगस्टमा तपाईलाई ज्याकेट लगाउने राम्रो अवसर हुँदैन, राम्रो रेस्टुरा वा भोजमा जानु भन्दा बाहेक। हालसालै जापानी मानिसहरु ज्याकेट ज्यादै धेरै व्यवसायमा लगाउँदैनन्। पुरुषहरूको लागि, अधिक व्यक्ति टाई लगाउन सक्दैनन्।
किनकि सूर्य कडा छ, यसले प्राय पसिना बगाउँदछ, त्यसैले रुमालहरू अपरिहार्य हुन्छन्। जब तपाईं बाहिर लामो समय सम्म जानुहुन्छ, कृपया टोपी लगाउनुहोस्। प्यारासोल तयार गर्नु महिलाको लागि राम्रो छ।
जुलाई वा अगस्टमा बाहिर जानुहुँदा कृपया ताप्दो स्ट्रोकबाट बच्न बारम्बार ओसिलो आपूर्ति गर्नुहोस्। त्यहाँ व्यायाम गर्न खतरनाक छ जब दिनहरू छन्। जापानमा, हरेक वर्ष त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जो तातो स्ट्रोकको कारण तल झर्छन्, त्यसैले सावधान हुन निश्चित गर्नुहोस्।
जस्तो कि इनडोर एयर कंडीशनिंग एकदम प्रभावकारी छ, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि कार्डिगन्स आदि तयार गर्नुहोस् यदि तपाईं चिसो मौसममा राम्रो हुनुहुन्न भने।
होक्काइडो र होन्शुमा हाईल्याण्डहरू पनि दिनमा दिनमा degrees० डिग्री भन्दा बढी हुन सक्छ। यद्यपि होक्काइडो आर्द्रतामा तुलनात्मक रूपमा कम छ, होन्शु भन्दा खर्च गर्न सजिलो छ। साँझमा यो २० डिग्री भन्दा तल चिसो हुनेछ, त्यसैले कृपया कार्डिगनहरू बिर्सनुहोस्।
यदि तपाईं माउन्ट आरोहण गर्दै हुनुहुन्छ भने। फुजी आदि, लामो बाहुला शर्ट र बाहिरी पोशाक अपरिहार्य छन्। किनभने सूर्यको किरण कडा छ, कृपया हाईकिंग टोपी पनि तयार गर्नुहोस्।
तल जापानी ग्रीष्म clothesतुका तस्वीरहरू छन्।
गर्मी मा परम्परागत जापानी कपडा को रूप मा त्यहाँ yukata छन्। युकाटा तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ (१ लुगा केही हजार येन भन्दा बढी छ), त्यसैले यदि तपाईंलाई रुचि छ, के तपाईं यसलाई जापानमा किन्नुहुनेछ र यसलाई लगाउनुहुनेछ? यो पक्कै राम्रो सम्झनाहरु हुनेछ।
जापानका प्रमुख कपडा पसलहरूका लागि मैले निम्न लेखमा परिचय दिएँ।
जापानमा Best उत्तम किनमेल स्थानहरू र Recommend सिफारिश गरिएका ब्रान्डहरू
यदि तपाईं जापानमा किनमेल गर्नुहुन्छ, तपाईं निश्चित रूपमा उत्तम शपिंग स्थानहरूमा सकेसम्म धेरै रमाउन चाहनुहुन्छ। तपाईं सायद आफ्नो समय शपिंग स्थानहरूमा बर्बाद गर्न चाहनुहुन्न जुन त्यति राम्रो छैन। त्यसैले यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापानमा सब भन्दा राम्रो किनमेल ठाउँहरू परिचय दिनेछु। कृपया ...
जब तपाईं जापान आउनुहुन्छ, तपाईं परम्परागत जापानी ग्रीष्मकालीन किमोनो "युकाता" भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ।
ऐन जस्ता किनमेल केन्द्रहरूमा, तपाईं पनि लगभग १,15,000,००० येन (जापानी शैलीको चप्पल लगायत आदि) को लागि युकाटा किन्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तल भिडियो हेर्नुहोस्।
"जापानी ग्रीष्म enjoyतुको आनन्द कसरी लिने" मा फिर्ता
जापानमा जाडो पहिरन! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
जापानी ग्रीष्मकालको मजा कसरी लिने! चाडपर्व, आतिशबाजी, समुद्र तट, होक्काइडो आदि।
जापानमा वसन्त पोशाक! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
जापानमा जुलाई! ग्रीष्मकाल बयाना मा सुरु हुन्छ! तातोबाट सावधान!
फोटोहरू: गर्मीमा पारम्परिक क्योटो
होक्काइडोमा जाडो पहिरन! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
फोटोहरू: जापानमा प्रमुख गर्मी चाडहरू!
जापानमा अगस्ट! टाइफुनमा ध्यान दिनुहोस्!
ओसाका जुलाईमा मौसम! तापमान र वर्षा
फोटोहरू: होक्काइडो को गर्मी फूल बगैंचा को ल्याण्डस्केप